सुटुक्क गरिएका पाप-कर्महरू ! « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सुटुक्क गरिएका पाप-कर्महरू !
प्रकाशित मिति : २०७८, २८ आश्विन बिहीबार १०:०३
१. हामी कतिपय कामहरू सुटुक्क गर्छौ, त्यसप्रकारका कामहरू अधिकांश पाप र अपराध मिसिएका हुन्छन् । हामी ठान्दछौं, — कसैले थाहा पाएको छैन अत्यन्त गोप्य तरवले गरिएको छ । तर हामी जतिसुकै गोप्यातिगोप्य तरिका अपनाएर गरौँ हामीले गरेका गोप्य कामहरू एक पटक न एक पटक उदाङ्गो हुन्छन् हुन्छन् । यस दुनियाँमा पापहरू अधिकांश उदाङ्गो भएका छन् । नेपालीमा एक भनाइ पनि छ—‘एक बुढियाले ठूलै अपराध गरेकी थिइन् । बारवर्षसम्म त्यसलाई तिनले लुकाई नै राखिन् । त्यसरी लुकाइराख्दा पनि तिनलाई शान्ति भने भएन । सधैँ आफ्नो पाप कसैले थाहा पाउँछ कि र आफू सजाय भागी हुनुपर्छ कि भन्ने त्रासले तिनलाई लखेटि नै रह्यो । यसरी सन्त्रस्त हुँदाहुँदै बाह्र वर्ष बित्यो । उनीभित्रको पापले उनी यति विक्षिप्त भइन् कि उनी त्यो पाप लुकाउन नसक्ने भइन् र आफ्नै घरको धुरीमा सकिनसकी चढेर कराइन् ‘ मैले त्यति ठूलो पाप गरेकी थिएँ । तर कसैले पनि थाहा पाएन र आज म आफै यो पाप उदाङ्गो पार्दै छु ।’ भनिन्छ त्यसै बेलादेखि पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उखान जन्मिएको हो । मानिसहरू त्यसैले अहिले पनि भन्ने गर्छन् ‘बाह्र वर्षसम्म पनि गोप्य रह्यो भने पाप एक दिन धुरीबाट कराउँछ ।’
२.अहिले पाप कहाँ कहाँ भैरहेछ ? । गनेर साध्य नै छैन, भनेर र लेखेर कुनै पनि हालतमा भ्याइँदैन । राजनीतिमा, न्यायालयमा, प्रशासनमा, व्यापार—व्यवसायमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा, वनमा, यातायातमा, उद्योग र वाणिज्यका क्षेत्रमा, विकासमा, ठेक्का—पट्टामा, घर—घरमा घरेलु हिंसाका नाममा जतासुकै पापहरू मडfरिइरहेका छन् । ती पाप र अपराधलाई नियन्त्र गर्ने भनिएका ठाउँमा र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन प्रयत्नरत हुने ठाउँ प्रहरीका माथिदेखि तलसम्मका कार्यालयहरूमा पाप र अपराधहरू हुने गरेका सम्चारहरू समय समयमा आउने गर्छन् । तत्तत् ठाउँका व्यक्तिहरू पाप गर्छन् तर सुटुक्क । तिनले सुटुक्क गरेका ती पापहरू उदाङ्गो बन्छन् । यस्तो कसरी हुन्छ ? भएको छ ।कसरी हुन्छ हुन्छ !
३.पाप सधैँ लुकेर बस्न सक्तैन । ज्वालामुखी जस्तै हुन्छ पाप र एक दिन विस्फोट भएर लाभाका रूपमा बग्न थाल्छ । अनि त त्यस लाभाले नराम्रोसँग जलाउँछ । भनिन्छ —जीवन कालमा ती पापहरू निस्कन सकेनन् र गोप्य बसे भने आखिरी अवस्थामा मृत्युृ शैयामा पल्टिएका बेला मानिस आफूले गरेका एक एक पापहरू देख्छ र अतालिनथाल्छ । तर अतालिएर के गर्नु त्यस बेला ऊ केही गर्न सक्तैन । वाणी उसबाट बिदा भैसकेको हुन्छ । दृष्टि शक्ति कमजोर बन्छ तैपनि ऊ आँखाको इसारामा आफ्ना पापहरूको प्रायश्चित्त सन्ततिहरूले गरिदिन्छन् कि भनेर आँखा फाल्छ तर नजिक बसेको सन्तान समेत ऊ देख्तैन र टाढा टाढा दृष्टि फाल्छ र फाल्दाफाल्दै ऊ यस दुनियाँबाट बिदा भएर जान्छ । बिदा भएर गएपछि त पापको कुरा सकिन्छ कि ? हाम्रा शास्त्रहरू भन्छन् ‘त्यस्तो पापबाट छुकारा पाइँदैन । भित्र हाम्रो हृदयमा साक्षी रूपमा बसेको अदृूश्य शक्तिले सबै कुरा माथि बताइसकेको हुन्छ र एक एक तथ्याङ्क त्यहाँ पल्टाइन्छ र उसले ती सुटुक्क गरिएका पापहरू अनुसारका फलहरू भोग्नुपर्छ रौरव, कुम्भीपाक आदि गरेका नरकमा गएर । यसरी पाप सुटुक्क गरेपनि त्यसले पिछा छोड्दैन ।